Greta Thunberg 'vanotsoropodza vanoita zvechisimba tsika dzisina kunaka kushaya vana-vasina hushamwari': kuguma kwechikonzero: Martin Vrijland
Akaiswa mukati Kuparadza Kupandukira, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we30 September 2019	• 5 Comments
Iyo Greta Thunberg nyaya iri kuve yakajeka uye yakajeka nzira yekubvisa chero mhando yekushoropodza pane chikonzero chechikonzero, asi pahwaro hwekunzwa kwemarara. Kupera kwevhiki ino ndakaisa meseji pane yangu yakavanzika nguva yekunyorwa kwe Facebook uye ndakaziviswa kuti kutumira kwangu kwakadarika miganhu yehunhu hunogamuchirika. Uye icho chaingova chikamu chemhinduro, chandakagamuchira nekukurumidza kupfuura munhu aigona kunge akaona vhidhiyo yandakatumira zvachose. Vhidhiyo iyoyo yakanyorwa naDavid Icke, umo anotsanangura chaizvo chaizvo kuti zviitiko zvemamiriro ekunze zvinoita kunge zvave zvichinyengerwa, zvaive zvisina kukodzera kutariswa. Uye ndiyo chaiyo mhedzisiro iyo Greta Thunberg inoita kunge yakashandiswa. Iro riri pasi pekuti "Hatichine nguva yekukurukura uye vatsoropodzi maitiro ehurombo anokanganisa kushaya vana-vasina hushamwari'
Rugwaro rwandaisa nevhidhiyo yeIcke zvakare rune hukama naDavid pachavo, uye kuti zvese zvinoratidzika sechikamu chechirongwa kuti usanzwe kutsoropodzwa kwakanyatsoripo, asi kuzvipisa se 'kurudyi' uye 'kune njodzi', pasina kana kugutsikana zvachose kuteerera. "Chikonzero" uye "kushoropodzwa kwakasimba" kwakabatanidzwa kune "kwezvematongerwo enyika zvisiri izvo" uye "kune ngozi." Izvo hazvichagona kuve nezve chikonzero uye chikonzero. Kubva zvino zvichienda pane zvese 'teerera kune zvaunoudzwa'uye wechidiki anotyisidzirwa nekutsakatisa kuburikidza nekudziya kwepasirese, ari kuisa gwara kubva zvino. Pazasi pane mavara andakaisa vhidhiyo yaDavid Icke:
Iwe unozotungamirirwa neiyo shanduko yemamiriro ekunze. Asi zvakadaro haufanire kuiteerera, nekuti inoda (ChiRungu kuitira: yakanyatsogadzirwa se 'brand') kuti ibatanidzwe ne 'kurudyi-bapiro rekurangana idiots' vanogona kupomedzerwa Brexit kukundikana uye kupera kwehupfumi nekuda kwehondo dzekutengesa. ; vanhu vanotenda kuti zvinokambaira zvinodzora nyika. Kusaidzira nhema kunopiswa kuchinhu icho chiri basa rehurongwa hwakakwana, saka hatisisiri kuteerera izvo.
Iyo PsyOpisa yekudziya yepasirese inotenderera nekutanga kwekutonga kwepasirese uye kutonga kwese kwese kwehupenyu hwako nekugadzira dambudziko renyika kuti tigamuchire mhinduro yataisazombobvuma. Iyo yakatarisana iri pazera rechidiki, nekuti ivo havana ruzivo rwekuparadzira nzira (sekufanana nevakuru vakuru, nenzira).
Vanogunun'una nezve 'kupisa kwepasi' kwakabatana naDonald Trump naBoris Johnson. Kana iwe ukatorega hupfumi huchiparara uye nekuisa izvo mune shangu dzeavo anorudyi mapapiro, iwe wakanangana nevanozeza mu1x. Nokubatanidza 'kushoropodzwa' kune yakanyatsogadzirwa yakavakwa kurudyi (anti-globalists, anti-mamiriro ekunze shanduko, nyika yenyika, mukadzi-asina ushamwari uye kwevanorangana theorists) iwe unogona kuita kuti munhu wese atsamwe neiyi yeruoko rweruboshwe kana iwe ukaita hupfumi kuparara. Iyoyo ndiyo iri nyore uye nzira inoshanda yekuputsa kutsoropodzwa munguva refu. Zviri nekugadzirwa.
Chikonzero chekuti isu tiri kubata neanodzora anopesana nepawns zvakakwezva kutarisa kwakawanda nekuti ivo vakasundidzirwa neiyo main media media (yakadai saDavid Icke, Alex Jones nevamwe vazhinji) imhaka yekuti idzi pawns dzaifanira kubatanidzwa neiyo maka "kurudyi" ("kurudyi-bapiro" muChirungu). Uye ikozvino tasvika padanho rekuti mhando iyi inofanira kuverengerwa 'kurudyi' kune njodzi. Chimiro chega chega chekupokana hachina basa: "vatsoropodzi vane njodzi". Ndiro chirongwa ichi chatiri kupupurira kurarama, naGreta Thunberg vari kutungamira chikamu.
Kushushikana pakati pevechikadzi uye kweusina kushamwaridzana kwaiitwa nekushora kwakadzora Robert Jensen, uyo anoti muvhidhiyo iri pazasi anogona kuda kukanda Greta padhuze nemahara ake pamusoro pemusoro wake. Iwe unonyatsofunga kuti uyu anonzi mupanduki anoti zvese zvinongoitika here? Kwete, anonamira kune yakanyatsofungidzirwa uye yakatemwa zvakatemwa demagogic script.
Basa revatongi vese rinopikiswa rinopesana kubva kuIcke kuenda kuJensen nderekuti ivo vanogona kuzivisa chokwadi chakawanda. Isu tasvika ikozvino padanho rakarongwa rekuti chokwadi icho hachichazoita basa zvakare. Greta Thunberg achaita neicho chakatotyisa njodzi mhando nezvakawandisa testosterone. Kuguma chaiko kwemurume kunge mhando kuri kuvonekwa. VaDonald Trump naBoris Johnson vakabvumidzwa kuita chiitiko chavo mune ino gwaro pasitepisi yezvematongerwe enyika yepasi rose pamalenzi emakamera enhema. Izvi ndizvo zvakakonzerwa nemhando yakanyatsovakwa kurudyi ('kurudyi-bapiro' muChirungu): chokwadi chakabatanidzwa nemucheka kurudyi uye nokudaro chinodhonzwa mukati metsime rekunyura kwenzvimbo.
Murume kazhinji kacho kari maziso kana kushamwaridzana nevakadzi (ona nyaya Trump en Johnson), tenda pakurangana, ndevemunyika uye "nyika yavo kutanga" vadziviriri. Ivo vanopesana nepasi rose uye havatendi mukudziya kwepasirese kwevanhu. Ndidzo dzinokonzeresa kusuwa kweupfumi hwese nekuti dzinofanirwa kuve dzakashata uye dzakaomarara murume kana zvichidikanwa. Kuve anotsoropodza uye kusagadzikana ndechimwe chinhu kune marudzi ane ngozi anonzi 'murume'. Hatichafanirwi kuteerera izvo mune ramangwana. Tichatanga ne "kunyadzisa kupisa". Kubva zvino zvichienda mberi varume vese ivavo vanogamuchira Greta Thunberg gif (ona foto ine chinyorwa) iyo inoti: "Unotyisa Sei!"
Magumo ekutaura ari pamberi. Isu tiri kuparidza kushambadzira kwepasirese kwakanyatsogadzirwa, iyo brand kurudyi yakabvumidzwa kuwana simba musimba rezvematongerwo enyika uye kutungamira, uye tozopedzisira tagadzirisa. Izvi zvinogonesa nzira yekupedzisira kunanga kuhurumende yenyika, uko vatsoropodzi havazombonzwikazve uye vanyangarika vakananga gulag.
Source chinyorwa listings: trouw.nl, www.mukir.dk, smh.com.au
Tags: 17, Boris, vatsoropodzi, Donal, Featured, zvepasi rose, Greta Thunberg, hoax, Jensen, Johnson, kutsoropodza, potcast, psyop, Robert, scamm, vanopokana, Trump, kudziya
Zvinorevei kuti iwe unoita zvinhu nepfungwa, izvo zvakanaka?
Hapana kana chakaipa kana iwe ukamisa zvinhu zvinhu, anodaro Muparadzi wezvekushisa kudziya
Onawo chinyorwa ichi mukutendeka nemusoro wenyaya: "Kunyavira kwemamiriro ekunze kunoenderana nekuvengwa kwevakadzi"
iwe unofanirwa kuvapa ivo, ivo vakaivaka zvakanakisa muzvikamu. Zvese zvinoenda zvinoenderana nescript ...
idd zvese zvakaitika zvichienderana nenzira yeDelphi
Iyo Delphi (ne) Technique ”yekurairidza vagari vakananga kumubatanidzwa ivo vakuru vakasarudzika nezvayo. Kazhinji zvinosanganisira chimwe chirongwa chitsva kana kutungamira iyo hurumende inoda kuenda, asi inoda vagari kuti vatenge-mukati. Maitiro acho akagadzirirwa kugadzira kupusha pasi nekuvhara mazwi anopikisa, kazhinji nekusimudzira vanopokana uye nekupa zano kuti vanopokana vane hutsinye, havana tsitsi, kana kungopusa. Hurumende dzemunharaunda dzinowanzo kodha kambani yekubvunza vane vashandi vakadzidziswa nzira iyi kana kusvika pachisarudzo chakatotangwa nehurumende nenzira inoita kuti vagari vatange kufunga kuti yaive pfungwa yavo, kwete yehurumende.
Ona 21 mhinduro
Hapana kutaura kwakachena nezve 'kudziya kwepasirese' kunogona ZVESE KUitika PASI pekutanga kutaura nezveEHEMA MUGOMBU iri GEENGINEERING. Hachisi chekudziya kwepasirese, CHINOGONESESA KUNOGADZIRA. Kubva ionospheric hita, stratospheric aerosols (chemtrails), trillion watt lasers, bunker mafuta kubva mungarava ... nezvimwewo, mamiriro ekunze akagadzirwa uye haasisiri echisikigo. ndicho chokwadi.
« Runyoro rwekutaura (TTS) uye nyowani yakafanana neyeMicrosoft Hololens 2
'Kusarudzika kwemamiriro ekunze' kwakabatana nefungidziro dzekupangana, vezvematongerwo enyika mapapiro uye manzwa »
Total Visits: 13.084.307